အောက်တိုဘာလ 1, 1965 ၏အစောပိုင်းနံနက်နာရီမှာတော့သမ္မတအစောင့်များနှင့်အငယ်တန်းစစ်ဘက်အရာရှိများ၏လက်တဆုပ်စာ, သူတို့ရဲ့ကုတင်ကနေခြောက်လစစ်တပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများထသူတို့ကိုပယ် hustled, သူတို့အသတ်ခံရ။ ဒါဟာစက်တင်ဘာလ 30 လပ်ြရြားမြ, နှိမ့်ချမယ်လို့တစ်အာဏာသိမ်းမှုဟုခေါ်သည့်အာဏာသိမ်း၏အစဖြစ်ခဲ့သည် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးသမ္မတ, ဆူကာနို။
ဆူကာနိုအတွက်ဇွန်လ 6, 1901 ရက်တွင်မွေးဖွားခဲ့သည် Surabaya နှင့်နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. Kusno Sosrodihardjo ပေးထားခဲ့သည်။
သူဟာလေးနက်နာမကျန်းအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ပြီးနောက်သူ့မိဘ, အကြာတွင်သူ့ကိုဆူကာနိုအမည်ပြောင်း။ ဆူကာနိုရဲ့အဖေ Raden Soekemi Sosrodihardjo တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည် မွတ်စ်လင် ဂျာဗားကနေများသည်မင်းမျိုးအနွယ်ဝင်နှင့်ကျောင်းဆရာမ။ မယ်တော်, Ida Ayu အဘိဓါန် Nyoman ချင်းရိုင်သည်တစ်ဟိန္ဒူခဲ့ ပုဏ္ဏားဇာတ် ဘာလီကျွန်းကနေ။
Young ကဆူကာနို 1912 သည်အထိဒေသခံတစ်ဦးမူလတန်းကျောင်းသို့သွားကြ၏ထို့နောက်သူ Surabaya မှာရှိတဲ့ဒတျချြအထက်တန်းကျောင်းများက 1916 ခုနှစ်တွင်နောက်တော်သို့လိုက်, Mojokerto အတွက်ဒတ်ခ်ျအလယ်တန်းကျောင်းသို့တက်ရောက်ခဲ့သည်။ လုလင်တစ်ဦးနှင့်အတူလက်ဆောင်အဖြစ်ခဲ့သည် ဓာတ်ပုံပြပွဲမှတ်ဉာဏ် နှင့်ဂျာဗား, ဘာလီ, ဆူဒနျ, ဒတျချြ, အင်္ဂလိပ်, ပြင်သစ်, အာရဗစ်, Bahasa အင်ဒိုနီးရှား, ဂျာမန်, နှင့်ဂျပန်အပါအဝင်ဘာသာစကားတွေအတွက်အခွက်တဆယ်။
အထက်တန်းကျောင်းများအတွက် Surabaya မှာရှိတဲ့နေစဉ်, ဆူကာနိုအင်ဒိုနီးရှားအမျိုးသားရေးခေါင်းဆောင် Tjokroaminoto နှင့်အတူနေထိုင်ခဲ့သည်။ သူကသူ့အိမ်ရှင်ကရဲ့သမီး, Siti Oetari နှင့်အတူမေတ္တာ၌လဲကျ, သူတို့သည် 1920 ခုနှစ်လက်ထပ်ခဲ့သည်။
နောက်တစ်နှစ်, သို့သော်, ဆူကာနို Bandung အတွက်နည်းပညာအင်စတီကျုမှာအရပ်ဘက်အင်ဂျင်နီယာလေ့လာဖို့ သွား. နောက်တဖန်မေတ္တာ၌ကျဆင်းခဲ့သည်။
ဤအချိန်, သူ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဆူကာနိုထက် 13 နှစ်အသက်ကြီးသူဘော်ဒါအိမျပိုင်ရှင်၏ဇနီး, Inggit ခဲ့သည်။ သူတို့ကတစ်ဦးချင်းစီကသူတို့ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်ကွာရှင်းနှင့် 1923 ခုနှစ်တွင်လက်ထပ်နှစ်ခု။
Inggit နှင့်ဆူကာနိုအနှစ်နှစ်ဆယ်အိမ်ထောင်သက်ကျန်ရစ်ပေမယ့်ကလေးတွေရှိခဲ့ဘူး။ ဆူကာနို 1943 ခုနှစ်တွင်သူမ၏ကွာရှင်းနှင့် Fatmawati အမည်ရှိဆယ်ကျော်သက်လက်ထပ်ခဲ့သည်။
Fatmawati ဆူကာနိုအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ပထမဦးဆုံးအပါအဝင်ကလေးငါးယောက်ကိုခံရလိမ့်မည်ဟု အမျိုးသမီးသမ္မတ , မီဂါ Sukarnoputri ။
1953 ခုနှစ်တွင်သမ္မတဆူကာနိုဖြစ်လာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် ဇနီးတစ်ယောက်ထက် ပို. မွတ်စလင်ဥပဒေနှင့်အညီ။ သူက 1954 ခုနှစ်မှာ Hartini အမည်ရှိဂျာဗားအမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့လက်ထပ်တဲ့အခါ, သမ္မတကတော် Fatmawati သူမသမ္မတနန်းတော်ထဲကပြောင်းရွှေ့နိုင်အောင်မျက်ထွက်တော်မူ၏။ လာမယ့် 16 နှစ်ကျော်, ဆူကာနိုငါးခုနောက်ထပ်မယားတို့ကိုယူမယ်လို့: Naoko Nemoto (အင်ဒိုနီးရှားအမည်, Ratna ဒေါ်ဒေဝီဆူကာနို), Kartini Manoppo, Yurike ဆန်းဂါးဆို, Heldy Djafar အမည်ရှိဂျပန်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့် Amelia la Rama လုပ်ပါ။
သူအထက်တန်းကျောင်းနေစဉ်ဆူကာနိုဒတျချြအရှေ့အင်ဒီးများအတွက်လွတ်လပ်ရေးစဉ်းစားလာတယ်။ ကောလိပ်ကျောင်းစဉ်အတွင်းသူအပါအဝင်ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံရေးအအတွေးအခေါ်များအပေါ်နက်ရှိုင်းစွာဖတ်ပါ ကွန်မြူနစ်ဝါဒ အင်ဒိုနီးရှားဆိုရှယ်လစ် Self-ဖူလုံရေး၏သူ့ကိုယ်ပိုင် syncretic အတွေးအခေါ်ဖွံ့ဖြိုးဆဲ, အရင်းရှင်ဒီမိုကရေစီနှင့်အစ္စလာမ်။ သူလည်းတူသောစိတ်အင်ဒိုနီးရှားကျောင်းသားများကိုများအတွက် Algameene Studieclub တည်ထောင်ခဲ့သည်။
1927 ခုနှစ်, ဆူကာနိုနှင့် Algameene Studieclub ၏အခြားအဖွဲ့ဝင် Partai Nasional အင်ဒိုနီးရှား (PNI), anti-နယ်ချဲ့, Anti-အရင်းရှင်လွတ်လပ်ရေးပါတီအဖြစ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုပွနျလညျဖှဲ့စညျး။ ဆူကာနိုဟာ PNI ၏ပထမဆုံးခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဆူကာနိုဒတ်ခ်ျကိုလိုနီကျော်လွှားအတွက်ဂျပန်အကူအညီတောင်းခံဖို့, စတဲ့တစ်ခုတည်းသောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံသို့ဒတျချြအရှေ့အင်ဒီး၏ကွဲပြားခြားနားသောပြည်သူများအစည်းလုံးဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်။
အဆိုပါဒတ်ခ်ျကိုလိုနီလျှို့ဝှက်ရဲမကြာမီ PNI ၏လေ့လာသင်ယူနှင့် 1929 ၏ဒီဇင်ဘာလနှောင်းပိုင်း၌, ဆူကာနိုနှင့်အခြားအဖွဲ့ဝင်များကဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ 1930 ၏နောက်ဆုံးငါးလလောက်ကြာမြင့်သောမိမိရုံးတင်စစ်ဆေးမှာ, ဆူကာနိုကျယ်ပြန့်အာရုံကိုဆွဲဆောင်ကြောင်းနယ်ချဲ့ဝါဒဆန့်ကျင်လှုပျရှားသည့်နိုင်ငံရေးမိန့်ခွန်းတစ်ခုစီးရီးဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
သူကထောင်ထဲမှာလေးနှစ်ချမှတ်ခံရနှင့်သူ၏ဝါကျအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်စတင် Bandung အတွက် Sukamiskin အကျဉ်းထောင်သို့သှားကွ၏ခဲ့သည်။ နယ်သာလန်နှင့်ထဲမှာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့မိန့်ခွန်း၏စာနယ်ဇင်းလွှမ်းခြုံနိုင်အောင်သဘောကျပြီးလစ်ဘရယ်အုပ်စု ဒတျချြအရှေ့အင်ဒီး ဆူကာနိုရုံတစ်နှစ်အကြာတွင်အကျဉ်းထောင်ကနေလွတ်လာခဲ့တာ။ သူအဖြစ်ကောင်းစွာ, သဘာဝ, အင်ဒိုနီးရှားလူတို့နှင့်အတူအလွန်ရေပန်းစားဖြစ်လာခဲ့သည်။
သူကထောင်ထဲမှာနေခဲ့စဉ်အခါ, PNI နှစ်ခုဆန့်ကျင်အုပ်စုသို့ခွဲ။ အဆိုပါ Pendidikan Nasional အင်ဒိုနီးရှား (PNI Baroness) ပညာရေးနှင့်ငြိမ်းချမ်းစွာခုခံမှတဆင့်နှေးကွေးတော်လှန်ရေးထောက်ခံနေချိန်တွင်တစ်ခုမှာပါတီ, ထို Partai အင်ဒိုနီးရှား, တော်လှန်ရေးတစ်ခုစစ်သွေးကြွချဉ်းကပ်မျက်နှာသာ။
ဆူကာနိုပို PNI ရဲ့ထက် Partai အင်ဒိုနီးရှားချဉ်းကပ်မှုနှင့်အတူသဘောတူညီခဲ့, ဒါကြောင့်သူကအကျဉ်းထောင်ကနေကသူ၏လွတ်မြောက်ရေးအတွက်ပြီးနောက် 1932 ခုနှစ်တွင်ကြောင်းပါတီ၏ဦးခေါင်းကိုဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူကဂျကာတာသွားရောက်လည်ပတ်နေစဉ်သြဂုတ်လ 1, 1933 တွင်ဒတ်ခ်ျရဲတပ်ဖွဲ့တစ်ဖန်ဆူကာနိုဖမ်းဆီးခဲ့သည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ 1942 ခုနှစ်, ဂျပန်ကြည်းတပ် ဒတျချြအရှေ့အင်ဒီးကျူးကျော်။ နယ်သာလန်၏ဂျာမန်သိမ်းပိုက်ခြင်းဖြင့်အကူအညီမှပယ်ရှင်း, ကိုလိုနီခေတ်ဒတျချြအလျင်အမြန် လက်နက်ချ ဂျပန်ရန်။ ဒတျချြအကျဉ်းသားအဖြစ်သြစတြေးလျမှသူ့ကိုပို့ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့, Padang, ဆူမားတြားမှဆူကာနိုအတင်းအဓမ္မ-ချီတက်ပေမယ့်ဂျပန်တပ်များချဉ်းကပ်အဖြစ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုကယ်တင်နိုင်ရန်အတွက်သူ့ကိုစွန့်ခွာခဲ့ရသည်။
အဆိုပါဂျပန်တပ်မှူးဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟီတိုရှီ Imamura, ဂျပန်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာအဆိုပါအင်ဒိုနီးရှားဦးဆောင်လမ်းပြရန်ဆူကာနိုစုဆောင်း။ ဆူကာနိုကအရှေ့အင်ဒီးထဲကဒတျချြကိုစောင့်ရှောက်၏မျှော်လင့်ချက်အတွက်ပထမဦးဆုံးမှာသူတို့နဲ့အတူပူးပေါင်းပျော်ရွှင်ခဲ့ပါတယ်။
သို့သော်ဂျပန်မကြာမီအဓမ္မလုပ်အားပေးခိုင်းစေမှုအဖြစ်, အထူးသဖြင့်ဂျာဗား, အငျဒိုနီးရှားလုပ်သားများသန်းပေါင်းများစွာအထင်ကြီးလာတယ်။ ဤရွေ့ကား romusha လုပ်သားများသုံးစစ်လက်နက်နှင့်ရထားလမ်းတည်ဆောက်ရန်နှင့်ဂျပန်အဘို့ကောက်ပဲသီးနှံများစိုက်ပျိုးခဲ့ကြရသည်။ သူတို့ကနည်းနည်းအစားအစာသို့မဟုတ်ရေနှင့်အတူအလွန်ခက်ခဲအလုပ်လုပ်ခဲ့နှင့်မှန်မှန်အလျင်အမြန်အင်ဒိုနီးရှားနှင့်ဂျပန်နိုင်ငံအကြားဆက်ဆံရေးငြာထားတဲ့ဂျပန်ကွီးကွပျမှူးကစော်ကားခံခဲ့ရသည်။ ဆူကာနိုကဂျပန်နဲ့သူ့ရဲ့ပူးပေါင်းချအသက်ရှင်နေထိုင်ဘယ်တော့မှလိမ့်မယ်။
1945 ဇွန်လမှာတော့ဆူကာနိုလွတ်လပ်သောအင်ဒိုနီးရှားသူ၏ငါးအချက် Pancasila, ဒါမှမဟုတ်အခြေခံမူမိတ်ဆက်ပေးသည်။ ထိုသူအပေါင်းတို့အဘို့ဘုရားသခငျ၌ယုံကြည်ချက်ပေမယ့်ဘာသာတရားအားလုံးကို, နိုင်ငံတကာမှာပဲလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်၏သည်းခံစိတ်, ရှိသမျှအင်ဒိုနီးရှား၏စည်းလုံးညီညွတ်မှု, ဒီမိုကရေစီသဘောတူညီမှုကတဆင့်, လူမှုရေးတရားမျှတမှုပါဝင်သည်။
သြဂုတ်လ 15, 1945 တွင်, ဂျပန်မဟာမိတ်အင်အားကြီးနိုင်ငံများမှလက်နက်ချ ။ ဆူကာနိုရဲ့ငယ်ရွယ်ထောက်ခံသူများချက်ချင်းလွတ်လပ်ရေးကြေညာဖို့သူ့ကိုတိုက်တွန်းသော်လည်းသူကပစ္စုပ္ပန်နေဆဲဂျပန်တပ်များအနေဖြင့်လက်စားချေကြောက်ရွံ့ကြ၏။ သြဂုတ်လ 16 ရက်နေ့တွင်စိတ်မရှည်လူငယ်ခေါင်းဆောင်များဆူကာနိုပြန်ပေးဆွဲ, အဲဒီနောက်အောက်ပါနေ့ရက်ကိုလွတ်လပ်ရေးကြေညာဖို့သူ့ကိုယုံကြည်စိတ်ချသွားတယ်။
သြဂုတ်လ 18 ရက်နေ့တွင်နံနက် 10 နာရီတွင်, ဆူကာနိုကသမ္မတနှင့်သူ၏မိတျဆှေဒုတိယသမ္မတအဖြစ်မိုဟာမက် Hatta ကဲ့သို့မိမိကိုမိမိနှင့်အတူလွတ်လပ်သောအင်ဒိုနီးရှားသမ္မတနိုင်ငံကြေညာသည်, မိမိနေအိမ်များ၏ရှေ့မှောက်၌ 500 ၏လူအစုအဝေးတို့အားမိန့်။ သူလည်း Pancasila ပါဝင်သည်သော 1945 အင်ဒိုနီးရှားဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေ, ပြဋ္ဌာန်း။
ဆဲနိုင်ငံတစ်ခုအတွက်ဂျပန်တပ်ဖွဲ့များကြေငြာသတင်းဖိနှိပ်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လည်းစကားစပျစ်ပင်မှတစ်ဆင့်လျင်မြန်စွာပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။ တစ်လအကြာမှာစက်တင်ဘာ 19, 1945 ရက်နေ့တွင်, ဆူကာနိုဂျကာတာ Merdeka ရင်ပြင်မှာတစ်ဦးထက်ပိုသန်းတဲ့လူအစုအဝေးတို့အားမိန့်။ ဂျပန်အခြားကျွန်းများပေါ်တွင်၎င်းတို့၏ကိုင်ထိန်းသိမ်းထားစဉ်သစ်ကိုလွတ်လပ်ရေးအစိုးရ, Java နဲ့ဆူမားတြားထိန်းချုပ်ထား; ဒတ်ခ်ျနှင့်အခြားမဟာမိတ်အင်အားကြီးနိုင်ငံများအထိပြသနိုင်ဖို့သေးရှိခဲ့ပါတယ်။
စက်တင်ဘာလ 1945 ၏အဆုံးခါနီးမှာဗြိတိသျှနောက်ဆုံးတော့အောက်တိုဘာလ၏အဆုံးအားဖြင့်အဓိကမြို့ကြီးများ၎င်းပြင်, အင်ဒိုနီးရှားရှိပုံပန်းသဏ္ဌာန်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ မဟာမိတ်များ 70,000 ဂျပန်ပြန်ပို့နှင့်တရားဝင်တစ်ဒတ်ခ်ျကိုလိုနီအဖြစ်က၎င်း၏အနေအထားကိုမှတိုင်းပြည်ပြန်လာ၏။ ကြောင့်ဂျပန်နှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူအဖြစ်သူ၏ status ကိုရန်, ဆူကာနိုအနေနဲ့ untainted ဝန်ကြီးချုပ် Sutan Sjahrir, ကိုခနျ့အပျသူအင်ဒိုနီးရှားသမ္မတနိုင်ငံအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသိအမှတ်ပြုဘို့တွန်းအားပေးအဖြစ်ပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲခွင့်ပြုရတယ်။
ဗြိတိသျှသိမ်းပိုက်မှုအောက်တွင်, ဒတျချြကိုလိုနီတပ်များနှင့်တာဝန်ရှိသူများကယခင်ဂျပန်များကသုံ့ပန်းကျင်းပဒတျချြ POWs တပ်ဆင်ပေးခြင်းနှင့်အင်ဒိုနီးရှားဆန့်ကျင်ပစ်ခတ်မှု network ပေါ်ကိုတက်လာတဲ့အပေါ်သွားပြန်လာစပြုလာသည်။ နိုဝင်ဘာလမှာတော့ Surabaya ၏မြို့အင်ဒိုနီးရှားထောင်ပေါင်းများစွာ၏ 300 ဗြိတိန်တပ်ဖွဲ့များကွယ်လွန်သွားသည့်အတွက်တစ် All-ထွက်စစ်တိုက်သို့ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ဒါဟာအဖြစ်အပျက်အင်ဒိုနီးရှားကနေသူတို့ရဲ့ဆုတ်ခွာမြန်မြန်ဖို့ဗြိတိန်အားပေးအားမြှောက်နှင့် 1946 ၏နိုဝင်ဘာလအသုံးပြုပုံအားလုံးဗြိတိသျှတပ်များသွားကြောင်းခဲ့ကြသည်။ သူတို့ရဲ့အရပ်ဌာန၌, 150,000 ဒတျချြစစ်သားတွေပြန်လာ၏။ အင်အားသုံး၏ဤပြပွဲနှင့်ရှည်လျားပြီးသွေးထွက်သံယိုလွတ်လပ်ရေးရုန်းကန်များ၏အလားအလာနှင့်အတူရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်, ဆူကာနိုဒတျချြအတူအခြေချစေ့စပ်ညှိနှိုင်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။
အခြားအအင်ဒိုနီးရှားအမျိုးသားရေးပါတီများထံမှ vociferous အတိုက်အခံနေသော်လည်းဆူကာနို, Java, ဆူမားတြား, သာ Madura သူ၏အစိုးရထိန်းချုပ်မှုပေးသောနိုဝင်ဘာလ 1946 Linggadjati သဘောတူညီချက်သွားရန်သဘောတူညီခဲ့သည်။ သို့သော် 1947 ခုနှစ်ဇူလိုင်လထဲမှာဒတ်ခ်ျသဘောတူညီချက်ချိုးဖောက်နှင့် Operatie ကုန်ပစ္စည်း, ရီပတ်ဘလီကန်-ကျင်းပကျွန်းများတစ်ခု All-ထွက်ကျူးကျော်စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံတကာပြစ်တင်ရှုတ်ချအောက်ပါလကျူးကျော်ရပ်တန့်ဖို့သူတို့ကိုအတင်းအကျပ်နှင့်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း Sjahrir ယင်းမှအယူခံနယူးယောက်မြို့မှပျံသန်း ကုလသမဂ္ဂ ကြားဝင်ပါ။
ဒတျချြပြီးသား Operatie ကုန်ပစ္စည်းဖမ်းဆီးရမိသည့်ဒေသများထံမှဆုတ်ခွာရန်ငြင်းဆန်လျက်, အင်ဒိုနီးရှားအမျိုးသားရေးအစိုးရဂျာဗားနှင့်ဆူမားတြားအတွက်အကောင်းဆုံးစိုက်ပျိုးမြေ၏ဒတျချြထိန်းချုပ်မှုအသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ဇန်နဝါရီလ 1948 အတွက် Renville သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ရတယ်။ အားလုံးကျွန်းများကျော်, ဆူကာနို၏အစိုးရနှင့်အတူ aligned မဟုတ်ပြောက်ကျားအုပ်စုများဒတျချြကိုစစ်တိုက်ခြင်းမှအပင်ပေါက်သော်လည်း။
1948 ဒီဇင်ဘာလမှာတော့ဒတျချြ Operatie Kraai ဟုခေါ်တွင်အင်ဒိုနီးရှား၏အခြားအဓိကကျူးကျော်မှုစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ သူတို့ဟာထို့နောက်-န်ကြီးချုပ်မိုဟာမက် Hatta ဟောင်းလေး-Sjahrir နှင့်အခြားမျိုးချစ်ခေါင်းဆောင်များ, ဆူကာနိုဖမ်းဆီးခဲ့သည်။
နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝုိင်းကနေဒီကျူးကျော်ရန်တန်ပြန်ပင်အားကောင်းရှိ၏ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရပ်တန့်ရန်ခြိမ်းခြောက် မာရှယ် Aid ကို ကရပ်တန့်မပြုခဲ့လျှင်နယ်သာလန်ရန်။ အားကြီးသောအင်ဒိုနီးရှားပြောက်ကျားကြိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့နိုင်ငံတကာဖိအားများ dual-ခြိမ်းခြောက်မှုအောက်, ဒတ်ခ်ျလြှော့။ မေလ 7, 1949 တွင်, သူတို့ကအမျိုးသားရေးမှ Yogyakarta ကျော်လှည့်, အ Roem-ဗန် Roijen သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့နှင့်အကျဉ်းထောင်ကနေဆူကာနိုနှင့်အခြားခေါင်းဆောင်များလွှတ်ပေးရန်။ ဒီဇင်ဘာလ 27, 1949 တွင် နယ်သာလန် တရားဝင်အင်ဒိုနီးရှားရန်၎င်း၏တောင်းဆိုချက်များလက်လွှတ်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။
1950 သြဂုတ်လမှာတော့အင်ဒိုနီးရှား၏နောက်ဆုံးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဒတျချြကနေလွတ်လပ်သောဖြစ်လာခဲ့သည်။ သမ္မတအဖြစ်ဆူကာနိုရဲ့အခန်းကဏ္ဍအများအားဖြင့်အခမ်းအနားခဲ့ပေမယ့်အဖြစ်က "နိုင်ငံတနိုင်ငံ၏ခမညျးတျော" ဟုသူကသြဇာလွှမ်းမိုးမှုတွေအများကြီး wielded ။ အသစ်တိုင်းပြည်စိန်ခေါ်မှုများများစွာရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်; မွတ်စ်လင်, ဟိန္ဒူ, ခရစ်ယာန်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား; တိုင်းရင်းသားတရုတ်အင်ဒိုနီးရှားနှင့်အတူတိုက်ပွဲဖြစ်ပွား; နှင့်အစ္စလာမ်မစ်လိုလားတဲ့ဘုရားမဲ့ဝါဒီကွန်မြူနစ်နှင့်အတူစစ်တိုက်ကြ၏။ ထို့အပြင်စစ်တပ်ဂျပန်-လေ့ကျင့်သင်ကြားတပ်များနှင့်ယခင်ပြောက်ကျားတိုက်ခိုက်ရေးသမားများအကြားအပိုင်းပိုင်းခွဲခဲ့ပါတယ်။
1952 ၏အောက်တိုဘာလများတွင်ယခင်ပြောက်ကျားပါလီမန်ဖျက်သိမ်းစေခြင်းတောင်းဆိုင့်ကားများနှင့်အတူဆူကာနို၏နနျးတျောကိုဝိုငျး။ ဆူကာနိုတစ်ဦးတည်းထွက် သွား. ဆင်း back ဖို့စစ်တပ်စည်းရုံးသိမ်းသွင်းသည့်မိန့်ခွန်း, အပ်ပေးတော်မူ၏။ 1955 ခုနှစ်တွင်နယူးရွေးကောက်ပွဲများသို့သော်နိုင်ငံတွင်းရှိတည်ငြိမ်မှုတိုးတက်လာဖို့ဘာမျှမ ပြု. , လွှတ်တော်အပေါငျးတို့သအမျိုးမျိုးသောတွင်းအုပ်စုအကြားခွဲဝေနှင့်ဆူကာနိုတစ်ခုလုံးကိုအဆောက်အပြိုကျမယ်လို့ကိုကွောကျရှံ့ခဲ့သည်။
ဆူကာနိုကသူကပိုအခွင့်အာဏာလိုအပ်နှင့်အနောက်တိုင်းစတိုင်ဒီမိုကရေစီမတည်ငြိမ်သောအင်ဒိုနီးရှားတွင်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ဘယ်တော့မှကြောင်းကိုခံစားရတယ်။ ဒုတိယသမ္မတ Hatta ကနေဆန္ဒပြမှုတွေကျော်, 1956 ခုနှစ်မှာသူသမ္မတအဖြစ်အဖြစ်, ဆူကာနိုအမျိုးသားရေးကိစ္စရပ်များတွင်တစ်ဦးသဘောတူမှလူဦးရေဦးတည်သွားစေလိမ့်မယ်အရာအောက်မှာ "ပဲ့ထိန်းဒီမိုကရေစီ" သူ့အစီအစဉ်ကိုဆန့ ်. ။ 1956 ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာတော့ Hatta တိုင်းပြည်တစ်ဝှမ်းနိုင်ငံသားများ၏ထိတ်လန့်ဖို့, ဒီဗြောင်ကျကျအာဏာဆုပ်ကိုင်ဖို့အတိုက်အခံအတွက်နှုတ်ထွက်ခဲ့သည်။
အပေါ် 1957 ခုနှစ်မတ်လတွင်သို့ဒါကလနှင့်, ဆူမားတြားနှင့် Sulawesi ကစစ်တပ်တပ်မှူးများရီပတ်ဘလီကန်ဒေသခံအစိုးရများ ousting, ပါဝါကိုယူ။ သူတို့ဟာ Hatta ရဲ့ reinstatement နှင့်နိုင်ငံရေးကျော်ကွန်မြူနစ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုမှအဆုံးတိုင်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ဆူကာနို "ပဲ့ထိန်းဒီမိုကရေစီ" ကိုယျတျောနှငျ့အတူသဘောတူညီခဲ့တဲ့သူဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Djuanda Kartawidjaja အဖြစ်ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်တုံ့ပြန်ပြီးတော့မတ်လ 14, 1957 ရက်တွင်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြေငြာခဲ့သည်။
ကြီးထွားလာတင်းမာမှုများနေရခြင်း, ဆူကာနိုကတော့ Darul အစ္စလာမ်ဘာသာအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးတစ်ဦးလက်ပစ်ဗုံးပစ်အသုံးပြုပုံအဲဒီမှာသူ့ကိုလုပ်ကြံရန်ကြိုးစားခဲ့, နိုဝင်ဘာလ 30 ရက်နေ့တွင်ဗဟိုဂျကာတာမှာရှိတဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်း function ကိုမှ 1957 ဝင်သဖြင့်, ဆူကာနိုထိခိုကျဒဏျရာမရှိဘဲခဲ့ပေမယ့်ခြောက်လကျောင်းကကလေးတွေသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
ဆူကာနို 40,000 ဒတ်ခ်ျနိုင်ငံသားများနှင်ထုတ်နှင့်၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများအားလုံး nationalizing, အင်ဒိုနီးရှားအပေါ်သူ၏ချုပ်ကိုင်တင်းကျပ်အဖြစ်ထိုကဲ့သို့သောတော်ဝင်ဒတျချြရှဲလ်ရေနံကုမ္ပဏီအဖြစ်ဒတ်ခ်ျပိုင်ကော်ပိုရေးရှင်း၏။ ထို့အပြင်သူသည်မြို့များကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့တရုတ်အများအပြားထောင်ပေါင်းများစွာအတင်းအကျပ်ကျေးလက်မြေယာနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတိုင်းရင်းသားတရုတျပိုင်ဆိုင်မှုဆန့်ကျင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုထူထောင်နှင့် 100,000 တရုတ်နိုင်ငံသို့ပြန်သွားပါ။
အဆိုပါစွန်အဖျားကျွန်းများထဲမှာစစ်တပ်ဆန့်ကျင်ဆင်းထားစေရန်, ဆူကာနိုဆူမားတြားနှင့် Sulawesi ၏ All-ထုတ်လေနှင့်ပင်လယ်ကျူးကျော်အတွက်စေ့စပ်။ အဆိုပါသူပုန်အစိုးရများအားလုံး 1959 ၏အစအားဖြင့်လက်နက်ချခဲ့, နောက်ဆုံးပြောက်ကျားတပ်များ 1961 ခုနှစ်သြဂုတ်လအတွင်းလက်နက်ချခဲ့သည်။
ဇူလိုင်လ 5, 1959 တွင်, ဆူကာနိုကလက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ voiding နှင့်သမ္မတသိသိသာသာကျယ်ပြန့်လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးသော 1945 ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ, ပြန်လည်နေရာချထားတဲ့သမ္မတရွေးကောက်ပွဲအမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ သူက 1960 ခုနှစ်မတ်လထဲမှာပါလီမန်ဖျက်သိမ်းသူကိုတိုက်ရိုက်အဖွဲ့ဝင်ထက်ဝက်ခန့်အပ်ထားသောအရာသစ်တစ်ခုပါလီမန်ဖန်တီးခဲ့သည်။ စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးအတိုက်အခံအစ္စလာမ်မစ်နှင့်ဆိုရှယ်လစ်ပါတီအဖွဲ့ဝင်များကအကျဉ်းကျများနှင့်ဆူကာနိုကဝေဖန်ခဲ့ကြတဲ့သတင်းစာပိတ်ပစ်။ သမ္မတကသူထောက်ခံမှုများအတွက်တစ်ခုတည်းကိုသာစစ်တပ်အပေါ်မှီခိုမဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အပြင်, အစိုးရကပိုမိုကွန်မြူနစ်တွေကိုထည့်သွင်းလာတယ်။
အာဏာရှင်စနစ်ဆီသို့သည်ဤရွေ့လျားတုံ့ပြန်ခုနှစ်, ဆူကာနိုတစ်ဦးထက်ပိုလုပ်ကြံမှုရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ မတ်လ 9, 1960 တွင်တစ်ဦးအင်ဒိုနီးရှားလေတပ်အရာရှိဆူကာနိုကိုသတ်မှမအောင်မြင်ကြိုးစားနေသည်, မိမိ MiG-17 နှင့်အတူသမ္မတနန်းတော် strafed ။ အစ္စလာမ်မစ်စဉ်အတွင်းသမ္မတမှာသေနတ် မနက်စောစော Al-Adha 1962 ခုနှစ်တွင်ပဌနာ, ဒါပေမယ့်နောက်တဖန်ဆူကာနို unhurt ဖြစ်ခဲ့သည်။
1963 ခုနှစ်, ဆူကာနိုရဲ့လက်ကောက်ယူပါလီမန်သူ့ကိုအသက်အဘို့သမ္မတခန့်အပ်ခဲ့သည်။ သငျ့လျြောသောအာဏာရှင်ဖက်ရှင်မှာတော့သူအားလုံးအင်ဒိုနီးရှားကျောင်းသားများအတွက်မဖြစ်မနေဘာသာရပ်များသူ့ကိုယ်ပိုင်မိန့်ခွန်းများနှင့်ရေးထားသောစာကို လုပ်. , တိုင်းပြည်အတွက်အားလုံးအစုလိုက်အပြုံလိုက်မီဒီယာမှသာမိမိအသဘောတရားနှင့်လုပ်ရပ်များအပေါ်အစီရင်ခံရန်လိုအပ်သည်။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးသူ၏အစွန်းရောက်ချွတ်ထိပ်, ဆူကာနိုကသူ၏ကိုယ်ပိုင်ဂုဏ်အသရေအတွက်, တိုင်းပြည်အတွက် "Puntjak ဆူကာနို," သို့မဟုတ်ဆူကာနို Peak အတွက်အမြင့်ဆုံးသောတောင်ပေါ်အမည်ပြောင်း။
ဆူကာနိုအင်ဒိုနီးရှားတစ်ဦးပို့လက်သီးထဲမှာမြိ်ု့ရှိသည်ဖို့သလိုပဲပေမယ့်, သူ့စစ်တပ် / ကှနျမွူနစျထောကျပံ့ညွန့်ပေါင်းပျက်စီးလွယ်ခဲ့ပါတယ်။ စစ်တပ်ကကွန်မြူနစ်ဝါဒ၏လျင်မြန်စွာကြီးထွားနာကြည်းခြင်းနှင့်လည်းလိုလားသူဘုရားမဲ့ဝါဒကွန်မြူနစ်မကြိုက်သူကိုအစ္စလာမ္မစ်ခေါင်းဆောင်များနှင့်အတူတစ်မဟာမိတ်ထွက်ရှာတော့တယ်။ စစ်တပ်ကစိတ်ပျက်ကြီးထွားလာခဲ့ sensing, ဆူကာနိုစစ်တပ်၏တနျခိုးကိုထိန်းချုပ်ရန် 1963 ခုနှစ်တွင်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးပယ်ဖျက်ခဲ့ပါ။
ဆူကာနိုအင်ဒိုနီးရှားလယ်သမားလက်နက် ပြု. သုံးစွဲဖို့ကွန်မြူနစ်ခေါင်းဆောင် Aidit ရဲ့ခေါ်ဆိုမှုကိုကိုထောက်ပံ့သည့်အခါ 1965 ခုနှစ်ဧပြီလမှာတော့စစ်တပ်နှင့်ကွန်မြူနစ်တွေအကြားပဋိပက္ခတိုးတက်လာခဲ့သည်။ အမေရိကန်နှင့်ဗြိတိန်ထောက်လှမ်းရေးသို့မဟုတ်ဆူကာနိုကဆင်းဆောင်ခဲ့၏ဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာစူးစမ်းဖို့အင်ဒိုနီးရှားစစ်တပ်နှင့်အတူအဆက်အသွယ်ထူထောင်ကြမည်မဟုတ်ပါပေမည်။ hyperinflation 600 ရာခိုင်နှုန်းရောနှောအဖြစ်ဤအတောအတွင်းသာမန်လူတွေအလွန်တရာခံစားခဲ့ရ; ဆူကာနိုဘောဂဗေဒအကြောင်းကိုနည်းနည်းဂရုစိုက်နှင့်အခြေအနေအကြောင်းဘာမျှမအမှုကိုပြု၏။
အောက်တိုဘာလ 1, 1965 တွင်, နေ့၏ချိုးမှာလိုလားသူကွန်မြူနစ် "30 ရက်စက်တင်ဘာလလှုပ်ရှားမှု" ဖမ်းမိခြင်းနှင့်ခြောက်လအကြီးတန်းတပ်မတော်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများကိုသတ်ကြ၏။ အဆိုပါလှုပ်ရှားမှုကတစ်ခုမကြာမီစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းမှုကနေနိုင်ငံတော်သမ္မတဆူကာနိုကာကွယ်ပေးရန်ပြုမူကြောင်းပြောဆိုထားသည်။ ဒါဟာပါလီမန်လွှတ်တော်ရဲ့ဖျက်သိမ်းနှင့်တစ်ဦး၏ဖန်တီးမှုထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် "တော်လှန်ရေးကောင်စီ။ "
မဟာဗျူဟာအရံ command ကို၏ဗိုလ်ချုပ်ဆူဟာတိုဟာတွန့်ဆုတ်ဆူကာနိုတို့ကတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၏ရာထူးမှရာထူးတိုးခံတော်မူပြီးမှ, အောက်တိုဘာလ2ရက်နေ့တွင်စစ်တပ်ကထိန်းချုပ် ယူ. , လျင်မြန်စွာကွန်မြူနစ်အာဏာသိမ်းမှုကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဆူဟာတိုနဲ့သူ့ရဲ့အစ္စလာမ္မစ်မဟာမိတ်များထို့နောက်မှာအနည်းဆုံး 500,000 လူတွေလူမြိုးတစျမြိုး-ကျယ်ပြန့်သတ်ခြင်း, 1.5 သန်းဖမ်းဆီးအကျဉ်းချ, အင်ဒိုနီးရှားထဲမှာကွန်မြူနစ်တွေများနှင့်လက်ဝဲတစ်ရှင်းလင်းမှုဦးဆောင်ခဲ့သည်။
ဆူကာနို 1966 ကြီးမားတဲ့၏ဇန်နဝါရီလထဲမှာရေဒီယိုကျော်လူဆွဲဆောင်အားဖြင့်ပါဝါအပေါ်သူ၏ကိုင်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ရှာသောအခါ ကျောင်းသားဆန္ဒပြပွဲများ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်များနှင့်တဦးတည်းကျောင်းသားပစ်သတ်နှင့်ဖေဖော်ဝါရီလထဲတွင်စစ်တပ်ကအာဇာနည်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ မတ်လ 11, 1966 တွင်, ဆူကာနိုကြောင်းအထွေထွေဆူဟာတိုကူးတိုင်းပြည်ထိထိရောက်ရောက်လက်ထိန်းချုပ်မှုဟာ Supersemar အဖြစ်လူသိများနေတဲ့သမ္မတအိမ်တော်အမိန့်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ တချို့ကသတင်းရင်းမြစ်သူသေနတ်မှာအမိန့်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြောင်းပြောဆိုကြသည်။
ဆူဟာတိုချက်ချင်းဆူကာနိုရဲ့နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားမိန်းမအား -a ကိုကိုးကားဆူကာနိုသစ္စာခံ၏အစိုးရနှင့်တပ်မတော်ဆေးကြောခြင်းနှင့်ကွန်မြူနစ်ဝါဒ၏မြေပြင်ပေါ်တွင်ဆူကာနိုဆန့်ကျင်စွပ်စွဲပြစ်တင်တရားစွဲဆိုမှုစတင်, စီးပွားရေးပေါ့ဆမှု, နှင့် "ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်စီးခြင်း" ။
မတ်လ 12, 1967 တွင်, ဆူကာနိုတရားဝင်သမ္မတကနေဖြုတ်ချခံခဲ့ရနှင့် Bogor နန်းတော်မှာနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တင်လိုက်တယ်။ ဆူဟာတိုစစ်အစိုးရကသူ့ကိုလျော်သောကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ခွင့်ပြုပါဘူး, ဒါကြောင့်ဆူကာနိုဟာဂျကာတာတပ်မတော်ဆေးရုံကြီး၌, ဇွန်လ 21, 1970 ရက်တွင်ကျောက်ကပ်ပျက်ကွက်၏အနိစ္စရောက်လေ၏။ သူက 69 နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။
ရှစစ်ပွဲများ - မာရသွန်၏တိုက်ပွဲ - 490 ဘီစီ
ဥရောပသမိုင်းအတွက် Key ကိုခေါင်းဆောင်များ
ခါလဒဲဗာဗုလုန်ဘုရင်ဗုခဒ်နေဇာ II ကို
အဆိုပါအခြား Reichs: ဟစ်တလာရဲ့တတိယ Reich ခင်မှာပထမနှင့်ဒုတိယအ
သင်ဟာမောပန်း Are တဲ့အခါမှာသင်ကလေ့ကငျြ့သငျ့သလော
က Nicholas, Movies Sparks
တွေ့ဆုံကောငျးကငျတ Zadkiel, ကရုဏာ၏အိန်ဂျယ်
Entelodon (Killer ဝက်)
သစ်ပင်ဆဲလ်ထဲမှာ Turgor ဖိအား
နည်းဥပဒေ 11: Teeing Grounds သို့
အယ်လ် Geiberger: အဆိုပါမူရင်း '' မစ္စတာ ဂေါက်၏ 59 ''
ရှောင်ကြဉ်ဖို့6MBA ဘွဲ့ရအင်တာဗျူးအမှား
အဆိုပါဘေ့အပေါ် Hammer-Ons များ Play လုပ်နည်း
သင့်မျက်နှာ Value ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေမ 15 အပြုံး Quotes
Quotes '' ဧဒုံဖမ်ပေါက်ဘယ်မှာ ''
Vendre - ရောင်းချရန်
အဆင့်များနှင့်မျက်နှာပြင်မင်းသားအန်တိုနီ Perkins ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ